=လူထုကျန်းမာရေး(အားလုံးသတိထားရမည့် ကော်ဖီခွက်ထဲကအဆိပ်)=
ကိုယ်သောက်မည့် ကော်ဖီခွက်ထဲ ကို အဆိပ်ခတ်၍ မသောက်မိကြပါစေနဲ့ ။
Coffee Mix ဖျော်ဖို့ ဇွန်း မရှိရင်ဒါမျိုး လွယ်လွယ် မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ။
တစ်ချို့သော ပစ္စည်းတွေက အပူနဲ့တွေ့ဆုံ ဓါတ်ပြုလိုက်တဲ့ အခါ ကင်ဆာ
ဖြစ်စေတတ်တဲ့ Chemical တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ Coffee Mix သောက်တဲ့
အခါ Coffee mix ကို ထည့်ပြီးရင် ရေနွေးထည့်…မွှေဖျော်လိုက်ရုံ ပါဘဲ/..
တစ်ကယ်လွယ် လွယ်လေးပါ. ။ ခက်တာက မွှေစရာ ဇွန်းက အဆင်သင့် မရှိချိန်. ။
ဒီ အခါမျိုး ဆို Coffee mix အိတ်လေး ကိုသေးသေးလေးခေါက်ပြီး တုတ်တံလေး
အဖြစ် အသုံးပြု ပြီးမွှေ တတ်ပါတယ်.. ။ ဒါကို သတိ ထား ရမှာပါ.။
အဲဒီလို ready made စားသောက်စရာတွေကို ထုပ်ပိုး ဖို့လုပ်ထားတဲ့ အိတ်တွေမှာ
formaldehyde (ဖေါမယ်လ်ဒီဟိုက် ) လို့ခေါ်တဲ့organic compound ပါဝင်နေပါတယ်။
အဲဒီ formaldehyde က ကင်ဆာ ကိုဖြစ်စေ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ် ပါဝင်တဲ့
အိတ်လေးကိုခေါက်ပြီး ကော်ဖီ ပူပူ ထဲ ထည့်ပြီး မွှေလိုက် တာဟာ ကိုယ်သောက်မယ့်
ကော်ဖီကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ပြန်ပြီး အဆိပ် ခတ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါဘဲ ။
တစ်ခါနှစ်ခါ က ကိစ္စ မရှိပေမယ့် အဲဒီလို မျိုး မကြာခဏ လုပ်မိနေရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်
လည်း ဆိုတာ တွေးကြည့် ရုံနဲ့ သိနိုင် ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျဖန်တီးထားတဲ့ ကော်ဖီ တစ်ခွက် အဖြစ်တော့ မှားယွင်း စီမံ
မဖန်တီး မိပါစေနဲ့ ။ အားလုံး ကော်ဖီသောက်ရင်း အလွယ်မလုပ်မိကြပါစေနဲ့.။.
ဒါ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်မို့ပါ။